LibreOffice 6.0 ichauya nemazhinji dhizaini ekuwedzera | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 6.0 ichauya iine dzakawanda dhizaini yekuvandudza
Luis Lopez | | Zvirongwa, Free Software
Kunyangwe hakuzove nekugadziriswazve kwakazara, sekutarisirwa kwevashandisi vazhinji, LibreOffice 6.0 ichave neyakakura dhizaini shanduko, kusanganisira zvitaera nyowani, gradients, shanduko ku Notebookbar uye yakagadziridzwa maturusi, pamwe nekushandisa iyo Elementary icon yakatarwa.
Pane mavhezheni maviri e Notebookbar mukati meLibreOffice 6.0, Boka rebara rakazara rakagadzirirwa Munyori, Calc uye Impress uye Tabbed Compact yeMunyori. Iwe unogona kuona iyo mienzaniso yemabhawa aya pazasi.
LibreOffice Notebookbar Yakabatana
LibreOffice Notebookbar Yakazara
Kubva kubhulogi reThe Document Foundation, rinotarisira LibreOffice, takatora hurukuro neboka rekugadzira software iyi uye vataura zvishoma nezvezvinhu zvavanofarira mune iyi vhezheni 6.0:
Iyo yakagadziridzwa tsika yemenu uye yakasarudzika maficha menyu anowanikwa kubva kubhairi rekushandisa. Pamusoro pezvo, iko kugona kutenderedza mifananidzo mumadhigiri akasiyana uye zvimwe zvidiki diki.
LibreOffice 6.0 inosvika muna Ndira 31
Ndira 31 ichave iri yepamutemo zuva rekuburitsa reLibreOffice yemapuratifomu ese akatsigirwa: GNU / Linux, MacOS uye Microsoft Windows. Izvo zvakasimbiswa izvozvo ichi chichava chikuru kuvandudza kubvira LibreOffice 5.0 yaburitswa, zvakaitika makore maviri nehafu apfuura.
LibreOffice 6.0 ichavawo neshanduko dzemukati uye zvitsva, puru nyowani yemaraibhurari enzvimbo yakavhurika ichawedzerwa iyo inobvumidza mushandisi chinja magwaro eODT kuita EPUB3 fomatipamwe nekuunza kunze magwaro nematemplate kubva kwakasiyana mazwi ekugadzirisa mazwi senge AbiWord, Microsoft Publisher, PageMaker, uye QuarkXPress.
Ehezve, kuchine zvimwe zvakavanzika zveLibreOffice 6.0 izvo zvichaburitswa kusvika svondo rinouya, zuva rekuburitswa kwayo. Iyo Gwaro Foundation iri kugadzirira chiziviso chikuru nerwendo rwezvinhu zvese zvitsva uye nekuvandudza iwe zvaunofanira kuziva.
Zvirokwazvo vese vateveri vemahara software vachanyatsoteerera kune nhau dzinouya neLibreOffice 6.0. Isu takagadzirira kupa mushumo wakadzama wekutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » LibreOffice 6.0 ichauya iine dzakawanda dhizaini yekuvandudza
Maria Rosa Gómez Toledano akadaro
Ndiri kutarisira kugadzira kodhi yangu yeVBA, yakanyorwa kwemakumi emakore, inoenderana neLibre Office Calc.
Kunyangwe ini ndisina tariro zvakanyanya. Ndinoda kuchinjira kuLibre Hofisi zvachose uye nekudaro ndinokanganwa Excel zvachose.
Pindura María Rosa Gómez Toledano
Eduardo Coronado Aguayo akadaro
Zvingave zvakanaka kana iyi vhezheni nyowani ikaverenga zvizere mafaira emuparidzi. Nenzira imwecheteyo iwe yaunogona kuverenga usina kuita shanduko kumafaira ezwi.
Pindura Eduardo Coronado Aguayo
uye kuVBA…., chinja kuPython zvirinani….
Pachave nevanhu vachataura kuti maitiro ndizvo zvese, asi izvo zviripo kana zvave zvinoita kwandiri kwandiri ZVAKANAKA uye SIMPLE.
Francis Flowers akadaro
Ndiri kushuvira kuti 31st isvike kuve neiyi nyowani vhezheni yerusununguko. Kutenda kuzhinji kune vese vanobatsirana vanoita kuti chirongwa ichi chakanaka chivepo, isu tichavafarira.
Pindura kuna Francisco Flores
Isu Tinofara Vashoma vakanonoka zvakare kusvika zhizha, asi ivo vachadzorera mari ...
Ubuntu 18.04 LTS ichauya nekukasira kweiyo boot maitiro